Yakachipa CNC yekugaya kabhoni simbi zvikamu fekitori nevatengesi Ouzhan
Kazhinji, iyo yakakwira iyo kabhoni yezvinhu yesimbi kabhoni, inowedzera kuomarara uye inowedzera simba, asi iyo yepasi ipurasitiki. Carbon simbi CNC yekugaya ine huwandu hwakawanda hwekushandisa uye inokodzera kwakawanda mamishini zvikamu. Ouzhan ichaita zvehunyanzvi kugadzirisa zvigadzirwa zvemuchina zvinoenderana nemadhirowa ako nezvinodiwa. The azvikuya zvikamu machine centre iri chaizvo akakodzera kugadzira workpiece mhando dzakadai rakakombama zvikamu uye curved tooling maturusi. Mativi akakombama anoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri minda, senge turbine mashizha, ngarava dzinofambisa, zvigadzirwa zvemaindasitiri zvine cylindrical conical huso, zvichingodaro. Kazhinji, iyo yakakomberedzwa pamusoro inogadziriswa nekugaya.
Carbon Simbi CNC Kwese-Kugaya-Carbon Simbi yekugaya Zvikamu Machining Center
Zvakanakira Ouzhan kabhoni simbi yakakora zvikamu
OEM yakagadzirirwa kabhoni simbi yekugaya sevhisi-China Shanghai CNC kabhoni simbi yekugaya zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, inogona kugadzirisa kabhoni simbi ine yakagadzika uye yakavimbika yepamusoro-chaiyo CNC yekugaya zvikamu. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuve nechokwadi chakakwana kugadzira kwekabhoni simbi yekugaya muchina zvikamu. Uye zvakare, iyo CNC yakakora kabhoni simbi zvigadzirwa zvinopihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye inogona kushandiswa mune akasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa inokwikwidzana mutengo masevhisi ekabhoni simbi CNC yekugaya zvigadzirwa kune edu akakosha vatengi.
Ouzhan kabhoni simbi yekugaya zvikamu zvemuchina zvikamu zvemhando
(1) Azvikuya ndege zvikamu
Hunhu hwenzvimbo dzendege dzinoratidzwa mune yekuti machined pamusoro inogona kunge yakafanana neiyo yakatenderera ndege, yakatarisa kune iyo yakatenderera ndege, kana pakona yakatarwa neiyo yakatenderera ndege; mazhinji ezvikamu zvakagadziriswa pamushini weCNC wekugaya zvikamu zvemuchadenga, uye zvikamu zvendege zviriMhando yakapusa yezvikamu muCNC yekugaya yekugadzirisa kazhinji inongoda maviri-akabatana kubatanidza kana matatu-akabatana kubatanidza kweatatu-akabatana CNC azvikuya muchina kuti uve kupatsanurwa. Munguva yekugadzirisa zvinhu, iyo machining pamusoro iri mukutarisana neichi chishandiso, uye magumo ekugaya kana nzombe yemhino mapanga inogona kushandiswa kune yakashata uye yekupedzisa machining.
(2) azvikuya pamusoro zvikamu
Hunhu hwezvakakomberedzwa pamusoro zvikamu ndezvekuti iyo yakamisikidzwa pamusoro ndeye nzvimbo ine nzvimbo yakakombama. Munguva yekugadzirisa, iyo yakashongedzwa pamusoro uye yekugaya cutter anogara ari munzvimbo yekutaurirana. Kumeso kupedzisa kunowanzoitwa pamwe nebhora rinopera chigayo.
Zvakanakira Ouzhan kabhoni simbi yekugaya sevhisi
- Zvese zvakagadziriswa CNC yakashongedzwa kabhoni simbi zvigadzirwa zviri pasi peyakaomeswa mhando kuongororwa
- Sekureva kwemadhirowa kana sampuli kugadzira chaiyo kabhoni simbi yekugaya zvikamu.
Pashure: OEM simbi isina simbi CNC michina zvikamu zvestall michini zvikamu